विराट मेडिकलमा मुटुको सुपर स्पेसियालिटी सेवा सुरु – Health Post Nepal
२०७८ असार ६ गते १५:२८
वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. माधव विष्टको आडमा विराट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा मुटुको सुपर स्पेसियालिटी सेवा सुरु भएको छ।
विगत दुई वर्षदेखि नै मुटुरोग सेवा सञ्चालन गर्न क्याथल्याब खरिद गरेको अस्पतालले हाल भने उच्च प्रविधियुक्त प्रयोगशाला, उपकरण र व्यवस्थित भवन निर्माणसहित विशेषज्ञ सेवा सुरु गरेको छ।
नेसनल हार्ट सेन्टर सिङ्गापुरबाट आफ्नो अध्ययन पूरा गरेका डाक्टर विष्टले विगत ७ वर्षदेखि नोबेल अस्पतालमा काम गर्दै आएका थिए। अब विराट अस्पतालबाट बिरामीहरुले मुटुको चिरफारविना नै उपचार गर्न पाउने भएका छन्।
‘मेरो नेतृत्वमा मुटुरोग विभागमा हृदयघात हुँदा तुरुन्त बन्द भएको मुटुको रगतको नसा खोल्ने ( प्राइमरी एन्जियोप्लास्टी), मुटुको साँघुरिएको रगतको नसामा स्टेन्ट वा जाली हाल्ने ( एन्जियोप्लास्टी ), मुटुमा ब्याट्री हाल्ने, भल्भ खोल्ने र जन्मजात मुटुमा हुने प्वाल विनाअपरेसन पाइपद्वारा टाल्नेलगायत क्लोज्ड हार्ट सर्जरी अन्तर्गतका सबै खाले सेवा प्रदान गरिछ।’, उनले भने।
विगतका कम मात्रै मानिसहरु अस्पताल आउने गरेका थिए। धेरैलाई मुटु रोगका बारेमा जानकारी नै थिएन। अहिले धेरैमा मुटुसम्बन्धी समस्या तथा यसको जटिलताबारे थाहा भएको छ। जसले मुटस परीक्षण गराउन आउनेको संख्या अहिले बढेको उनी बताउँछन्।
बिरामीहरुमा रगतको नसा बन्द भएपछि हृदयघात हुने गर्छ। यस्ता बिरामीहरुलाई स्टेन्ट राखेर नशा खुलाउने काम गरिन्छ।
‘७० प्रतिशतभन्दा बढी रगतको नशा बन्द भएका बिरामीहरुमा स्टेन्ट राखिन्छ भने सो भन्दा कम भएका बिरामीहरुलाई भने औषधी दिएर खुलाइन्छु,’ उनले भने।
अस्पतालले मुटुको रगतको नसा के कति साँघुरिएको छ भनी पत्ता लगाउन गरिने एन्जियोग्राफी र टिएमटी मेसिनको पनि सेवा उपलब्ध गराएको छ। त्यस्तै, मुटुमा आउने अर्को समस्या भनेको मुटुको चाल कम हुनु हो। उमेर बढ्दै गएपछि यो समस्या बढ्दै जान्छ। यस्तोमा मुटुमा व्याट्री राखेर उपचार गरिन्छ भने होल्डर मेसिन प्रयोग गरी मुटुको चालसम्बन्धी गडबडको जानकारी लिइन्छ। यो सुविधासमेत अस्पतालमा उपलब्ध भएको छ।
बच्चा गर्भमा हुँदा कसैको मुटुमा प्वाल हुन्छ। जन्मदा उक्त प्वाल बन्द हुनुपर्छ। यदि जन्मदा प्वाल बन्द नभए शल्यक्रिया गरेर बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्वाल बन्द गर्नका लागि शल्यक्रिया नै गर्नुपर्दैन। शल्यक्रिया मुटु नचिरीकनै पाइपको माध्ययमबाट गर्न सकिन्छ।
अस्पतालसँग कार्डियो प्राविधिक, कम्पिटेन्ट नर्स, मेडिकल अफिसर र चिकित्सकहरू भएका कारण सबै खाले मुटुको समस्या समाधान गर्न सकिने विष्टले बताए।
उनले मानिसहरुमा भएको जानकारी र सचेतना कै कारण हाल मुटुको बिरामी बढेको देखिएको तर, मानिसमा चेतना भने आएको बताए।
सबैभन्दा बढी मुटुको समस्या जंक फुड खानेहरुमा देखिएको उनले बताए। ‘प्रकृतीमा उत्पादन भएका खानेकुरा खाँदा मुटुको रोगको सम्भावना न्यून हुन्छ। दही, दुध, माछामासु, तरकारी, फलफुल जे खाँदा पनि यस्ता समस्या निम्त्याउँदैन। तर, प्लास्टिकभित्र राखिएका प्रोसेस्ड फुड तथा पेय पदार्थ ले भने मुटुका समस्या बढाउँछ,’ उनले भने।
‘प्लाष्टिकभित्र राखिएको खानेकुरा तथा जुसहरुमा नकुहिने केमिकल राखिएको हुन्छ, जसले हाम्रो शरीर तथा मुटुलाई असर गर्छ। त्यसैले सकेसम्म त्यस्ता खानेकुरा नखाँदा राम्रो हुन्छ।’, विष्टले भने।
अस्पतालले १२ करोडभन्दा बढीको लगानीमा मुटु रोग विभाग सञ्चालनमा ल्याएको हो।
डा. माधव विष्ट